नेपालदृष्टि । नेपाली कांग्रेस विराटनगर महानगर समितिले विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरका लागि सात जनाको नाम सिफारिस गरेकोमा मेयरका अन्य आकांक्षीहरूले गम्भीर असहमति जनाएका छन् । छलफलै नगरी चुपचाप ढंगले नाम सिफारिस गरेको भन्दै सो सिफारिसप्रति असहमति जनाएका हुन् ।
मेयरका दावेदार रामकृष्ण भट्टराईले नाम सिफारिस गर्नुभन्दा अघि छलफल गरेर सबैको सहमति लिएर मात्रै निर्णय गर्ने भनिएकोमा आफूलाई थाहै नदिइकन आफ्नो नाम काटेर सिफारिस गरेको भन्दै सिफारिसको निर्णयप्रति असहमति जनाएका हुन् । सो विषयमा बुझ्दा क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समिति र प्रदेश समितिले समेत अनभिज्ञता प्रकट गरेको भट्टराईले बताए ।
निर्णय गर्दा पूर्वाग्रहरहित भएर कसैप्रति पक्षपात नगरीकन गर्नु पर्नेमा त्यसरी निर्णय नगरिएको भन्दै सिफारिसमा नाम नपर्नेहरूले असन्तुष्टी जनाएका हुन् । उपमेयरमा १२ जनाको नाम सिफारिस हुने, मेयरमा चाहिं किन सात जना मात्रै ? सर्वसम्मत गर्न सकिंदैन भने आकांक्षीहरू सबैको नाम सिफारिस गर्नु पर्थ्यो । त्यसो नगरी सात जनाको मात्र नाम सिफारिस गरिएको हो ।
नेपाली कांग्रेसबाट विराटनगरको मेयरमा शुरूमा नागेश कोइराला, इन्दिरा कार्की, भीम पराजुली, फूलकुमार लालवानी, रामकृष्ण भट्टराई, अरूण गुप्ता, दिलिप धाडेवा आदिको नाम चर्चामा थियो । दीपक चापागाईं नगर सभापति भएकाले आफ्नो नामसमेत राखेर सिफारिस गरेका हुन् ।
केन्द्रीय राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि डा डिला संग्रौला र अमृत अर्यालको नाम थपिएको हो । चर्चामा रहेकाहरूमध्ये रामकृष्ण भट्टराई, फूलकुमार लालवानी र अरूण गुप्ताको नाम हटाइएको छ । भट्टराई, लालवानी र गुप्तामध्ये भट्टराई मेयरका प्रवल दावेदार हुन् । मेयरको टिकटकै लोभमा दिलिप धाडेवाले भने नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेर राप्रपामा प्रवेश गरेका छन् ।
मेयर होस या उपमेयर अथवा अन्य पदमा पार्टीले पार्टी कार्यकर्ताहरूबाटै नाम सिफारिस गर्छ । तर मेयरका नाम चयन गर्दा कुशल मेयरका रूपमा काम गर्न सक्ने भिजन भएको योग्य र अनुभवीहरूको मात्र नाम सिफारिस गर्नु पर्नेमा नगर समितिले त्यस्तो मापदण्ड नअपनाएको पाइएको छ ।
महानगरपालिकाको मेयरका आकांक्षी फूलकुमार लालवानी नाम सिफारिस गर्दा आफूखुसी ढंगले नगर कमिटीले निर्णय गरेको हो भन्दछन् । उनले आफूखुसी निर्णय गर्नु गलत हो भने ।
राजनीतिक चेतनाको उद्गमस्थल विराटनगरको मेयरमा अबको २० वर्षपछि विराटनगर कस्तो हुन्छ र कस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने परिकल्पना गर्न सक्ने यहाँको शिक्षा, सवास्थ्य, उद्योग, व्यापारलाई कसरी अघि बढाउने, व्यवस्थित बसोवासका लागि नयाँ आवास योजनासहित बाटो–घाटो, नाला, ढल आदिको पनि उचित व्यवस्था गर्न सक्ने राजनीतिक भिजन र विकासको समेत प्रष्ट भिजन भएको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय क्षमता भएको योग्य व्यक्ति चयन गर्नु पर्नेमा उम्मेदवार चयन गर्दा त्यसलाई आधार बनाएको देखिंदैन ।
ग्याँस नपाएर नागरिकको घरमा आगो बलेन भने ग्याँसको व्यवस्था गर्न सक्ने मानिस चाहिन्छ । ग्याँस सिलिण्डर बोकेर दौडिने मेयर होइन, त्यसको व्यवस्थापन मिलाउने क्षमताको मेयर चाहिन्छ भन्ने चाहना महानगरवासीको छ । तर राजनीतिक दलहरूले भने जन चाहनालाई बुझ्ने प्रयत्न गरेको पाइएको छैन । - उद्घोष दैनिक
अशोक शर्माको “जय भोले”सार्वजनिक(भिडियो सहित)
बागलुङमा २८ नयाँ झोलुङ्गे पुल थपिए
किन प्रम ओली, हृदयश त्रिपाठीसँग असन्तुष्ट ?
प्रदेशसभाका पदमुक्त चार सदस्य सर्वोच्च अदालतमा